Magaaladda Zurich | Taxi ilaa garoonka diyaaradaha Zurich
Gaadiidka gawaarida ee Zurich, waa lacag jaban oo raaxo leh.
Tagsigaaga gaarka ah ayaa u wareejinaya ama ka imaanaya Madaarka Zurich
Mareegaha Madaarka Zurich ee TSB wuxuu macaamiisha siinayaa fursad ah kharashka waxtarka leh ee laga bilaabo iyo ilaa Madaarka Zurich inuu yimaado. Darawaliinno saaxiibtinimo leh oo ku caawiya baabuurta nadiifka ah ayaa diyaar ah. Ilaa xawaaladaha 7 halkii lagu wareejin lahaa.
Flughafentransfer Zürich – Jetzt buchen und beim Fahrer bezahlen
Uma baahnid inaad horay u sii bixisid lacagtii garoonka diyaaradaha ee Zurich. Waad ka dalban kartaa telefoonka ama si fudud oo aad u diri kartaa e-mail oo si toos ah ugu diraya darawalka tagaasida ka dib markaad raaceyso.
Sida loo bixiyo lacagta laguu iibsado ee Zurich
Waxaan aqbalnaa lacagta caddaanka ah ee Faransiiska Faransiiska iyo Euros. Dhamaan kaararka deynta sida visa, AMEX ama Mastercard. Markaad codsato, waxaad sidoo kale bixin kartaa kaadhka garoonka diyaaradaha ee Zurich horay ugu sii deyn kartaa kaarka deynta.